UMFCCI The Republic of The Union of Myanmar Federation of
အသင်းချုပ်အကြောင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီများ ညီနောင်အသင်းများ ဆောင်းပါး	ဖွဲ့စည်းပုံ ဆက်သွယ်ရန် တုံ့ပြန်မှု အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မေးခွန်း/အဖြေများ
အသင်းဝင်ရောက်ရန် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ အသင်းဝင်ရန် သိကောင်းစရာ အသင်းဝင်ရောက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အသင်းသားသက်တမ်းတိုးရန် e-CO လျှောက်ထားရန် အသင်းသားလျှောက်ရန် အခက်အခဲများကိုတင်ပြရန်
လစဉ်ဟောပြောပွဲ Arbitration အလုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှု ကုန်စည်ပြပွဲများ မြန်မာကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ရေးဗဟိုဌာန ခန်းမဝန်ဆောင်မှုများ Find Your Business Partners
လစဉ်ဒုတိယသမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းအစည်းအဝေး မြန်မာစီးပွားရေးအင်နီရှီတစ် ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု လူမှုရေးတာဝန်လုပ်ငန်းများ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်စီးပွားရေး B4B Insights ဖိုရမ် မူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပေးမှု နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အာဆီယံစီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီ အသေးစား/အလတ်စားလုပ်ငန်းများ
ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ညီလာခံအစီရင်ခံစာ လစဉျစာစောင် B4B အစီရင်ခံစာ IMS Report
UMFCCI News Association News Regional Chamber News Government News Exhibition News
Announcements Press Releases Spokesperson
ဖေ့ဘုတ် တွစ်တာ ယူကျူ့
သင်တန်းများ အလုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာလေ့ကျင်ရေးသင်တန်းကျောင်း
ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်‌အောက်ရှိ မြန်မာစီးပွား‌ရေးဖိုရမ် (MBF) ကို မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ် (Myanmar Business Initiative) အဖြစ်အမည် ‌ပြောင်းလဲ၍ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုလည်း (၁၂) ခုအထိတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်သည် မြန်မာနို်င်ငံတွင်း စီးပွား‌ရေးလုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထား‌သော နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု‌သော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်း အပြန်အလှန်‌ဆွေး‌နွေးမှုမှ ရရှိလာ‌သော ရလဒ်များကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ နှင့် အစိုးရကဏ္ဍတို့ အပြန်အလှန်‌ ဆွေး‌နွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားစီးပွား‌ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီကာ ‌ကောင်းမွန်‌သော စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်‌ကောင်းများ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်‌ရေး နှင့် ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်‌စေပြီး၊ နိုင်ငံ‌တော် စီးပွား‌ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာ‌စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်၏ အဓိက‌ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိ လုပ်ငန်းများ၏ အသံနှင့် ဆန္ဒကို နား‌ထောင်ရန်၊ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ တင်ပြလာ‌သော စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ‌လေ့လာသုံးသပ်၍ ‌ဖြေရှင်းရန်အတွက် အကြံပြုချက်များ ‌ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ ယင်းအကြံပြုချက် များကို သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြ၍ အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်ရန် နည်းလမ်းများအား ပူး‌ပေါင်း‌ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်စုံစမ်းခြင်းပြု၍ လက်‌တွေ့ထိ‌ရောက်‌သော ပြုပြင်‌ပြောင်းလဲမှုများ ရရှိ‌အောင် ‌ဆောင်ရွက်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ တင်ပြ‌သော ကိစ္စရပ်များကို (၁) ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦး‌ဆောင်‌သော လစဉ်ကျင်းပသည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေး အစည်းအ‌ဝေးများ ၊ (၂) ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးဖိုရမ် (B4B Insight Forum)၊ (၃) ကုန်သွယ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အား‌ပေးမြှင့်တင်‌ရေး လုပ်ငန်း‌ကော်မတီ တို့တွင် အလျင်းသင့်သလို တင်ပြ ‌ဖြေရှင်း‌ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂) ခုမှာ ‌အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Industrial Working Group
၂။ ကုန်သွယ်‌ရေး နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Trade and Investment Working Group
၃။ လယ်ယာ၊သားငါး၊သစ်‌တော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Agriculture, Livestock and Forestry Working Group
၄။ သဘာဝသယံဇာတ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Natural Resources Working Group
၅။ လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Electricity and Energy Working Group
၆။ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Hotel and Tourism Working Group
၇။ အ‌ခြေခံအ‌ဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Infrastructure Working Group
၈။ ကုန်စည်သယ်ယူပို့‌ဆောင်‌ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Transport and Logistics Working Group
၉။ ပညာ‌ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Education Working Group
၁၀။ ကျန်းမာ‌ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Health Working Group
၁၁။ ဆက်သွယ်‌ရေး၊ သတင်း နှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့- ICT & Communication Working Group
၁၂။ ဥပ‌ဒေ‌ရေးရာ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Legal and Regulatory Working Group
Dropahere to receive news and updates
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!
© 2018 Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry. All Rights Reserved.